CAFFEE – (19/06/2011):- Caffeen Oromiyaa ejjennoo mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf qabate yoomiyyuu taanaan kan deeggaruufi tumsa barbaachisaa
CAFFEE – (19/06/2011) Gabaasa Raawwii Karoora Hojiiwwan Gurguddoo Walakkaa Waggaa Bara 2011Qaama Raawwachiisaa Pireezidaantiin MNO Caffeef dhiyeessan keessaa cuunfamee kan fudhatame - Friday, 01 March 2019
CAFFEE – (19/06/2011):- Caffeen Oromiyaa ejjennoo mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf qabate yoomiyyuu taanaan kan deeggaruufi tumsa barbaachisaa - Friday, 01 March 2019
CAFFEE – (19/06/2011):- Caffeen Oromiyaa ejjennoo mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf qabate yoomiyyuu taanaan kan deeggaruufi tumsa barbaachisaa kamiyyuu kan taasisu ta'uu Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo beeksisan.
Yaa’ii Idilee 9ffaa Waggaa 4ffaa BHC 5ffaa taa'amaa jiru haasawaan kan banaan Afyaa'iin Caffee Kab. Addee Loomiin ji'oota jahaan dura Yaa’ii Idilee 8ffaa Waggaa 3ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa taa'een Caffeen raawwii hojiiwwan misoomaa, nageenyaafi dimokiraasii Naannoo keenyaa kan bara 2010 qorachuun ciminootaafi hanqinoota jiran adda baasee, rakkoolee mul'ataniifis kallattii furmaataa kan kaa'ee yemmuu ta'u, kallattiiwwan gurguddoo karoora bara 2011fi baajata karoorri kun itti raawwatamu raggaasisuun hojii keessa seenuu isaa yaadachiisan. Kana malees jedhan Addee Loomiin, dhimmoota xiyyeeffannoo addaatiin raawwatamuu qabu jedhee kallattii kaa'e keessaa; nageenya naannoo keenyaa mirkaneessuufi ol'aantummaa seeraa kabachiisuun isaan ijoo ta'uu irra deebiin yaadachiisaniiru. Caffeenis, aangoofi hojii seeraan adda bahee kennameef irratti hundaa'uun raawwii qaamolee mootummaa hordofaafi too'achaa turuusaa ibsaniiru.
Rakkoo nageenyaan walqabatee uumame, Mootummaan dirree demokiraasii bal'isuuf ejjennoo cimaa qabatee hojjetaa bakka jirutti qaamoleen jijjiirama kana gufachiisuuf yaalii garaagaraa yeroo taasisan mul’atee jira. Ol'aantummaa seeraa kabachiisuun ejjennoo mootummaan qabate Caffeen Oromiyaa yoomiyyu taanaan kan deeggeruufi tumsa barbaachisaa kamiyyuu kan taasisu ta'ee, milkaa’ina adeemsa cehumsaa kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu hundi gumaacha akka taasisuuf gaafatan.
Caffeen Oromiyaa Dhaabbileen Demokiraasiifi Mirga Namoomaa naannoo keenya keessatti gurmaa'anii socho'an hojii isaanii karaa qindaa'eefi hiika qabuun bahachuu akka danda'aniif Fooramii Dhaabbilee Demokiraasii fi Mirga Namoomaa kan hundeesse yemmuu ta'u, sirna dhaabbileen kunniin itti hogganamanis qopheessuun yaa'ii hundeeffamaa irratti erga bal'inaan mari'atee raggaasiseen booda gara hojiitti seenee jira. Fooramiin dhaabbate kunis aadaa demokiraasii biyyaafi naannoo keenyaa dagaagsuu keessatti gahee guddaa akka gumaachu abdatamee hojjatamaa jiraachuu Addee Loomiin ibsan.
Dhimmoota jiraachuu demokiraasii mirkaneessan keessaa inni tokko sirni wal-too'annoo (Check and Balance) cimaa ta'e qaamolee mootummaa gidduutti diriiree argamuu isaati kan jedhan Addee Loomiin, haala naannoo keenyaa yoo ilaallu sadarkaa naannootti rakkoon jiraachuu baatus, sadarkaa Manneen Maree Aanaafi Magaalotaatti darbee darbee hanqinoonni kan jiran ta'uu isaa hojii hordoffiifi deeggersaa taasifamaa ture keessatti hubatamee kan jiru ta'uu ibsan.
Rakkooleen bulchiinsa gaarii hiikamanii misoomni ummanni keenya barbaadu akka mirkana’uu fi injifannoon gama siyaasaatiin goonfanne; diinagdeen akka dabaalamu yeroo kamiyyuu caalaa tokkoomnee hojjechuun barbaachisaa waan ta’eef Caffeen keenyas seerota qulqulluufi rakkoolee kanneen bu’uurarraa dhabamsiisuu danda’an baasuu fi hojiirra akka oolan taasisuu keessatti hojii guddaatu irra eegama jedhan.
Yaa’iin Idilee 9ffaa Waggaa 4ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa har’a irraa egalee adeemsifamu kunis qaama hordoffiifi to’annoo keenyaa keessaa isa tokko kan jedhan Addee Loomiin, Caffeen Yaa’ii kanarratti Gabaasa Raawwii Hojii Walakkaa Waggaa Qaama Raawwachiisaa dabalatee ajandaalee biroo dhiyaatan irratti bal’inaan mari’achuun murtoofi kallattii adda addaa kan kaa’u ta'uu ibsuun haasawaa taasisan xumuuran.
Toorbee kana 2856
Ji'a kana 79264
2008 irraa eggalee 2934528
Kan Ammaa Ilaalaa jiran 36
CAFFEE – (19/06/2011…
_____ //____Misooma ariifataa fayyadamummaa uummataa irratti hundaa’eefi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf karoorri bara 2011 Caffeen ragga’ee hojiirra kan oole ta’uu Pireezidaantiin MNO Kab. Obbo Lammaa Magarsaa gabaasa walakkaa waggaa Caffeef dhiyeessan...
CAFFEE – (19/06/2011):- Caffeen Oromiyaa ejjennoo mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf qabate yoomiyyuu taanaan kan deeggaruufi tumsa barbaachisaa kamiyyuu kan taasisu ta'uu Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo beeksisan. _______ //_______ Yaa’ii...